Manni fayyaa Dakota County akka himeeti sababa covid-19 namni tokko du’uu himan, waliigalatti namni
KWIT | By Fatiya Adam
Published June 15, 2020 at 9:12 PM CDT
Manni fayyaa Dakota County akka himeeti sababa covid-19 namni tokko du’uu himan, waliigalatti namni du’ee 32 gaheera. Ammas saalaa fi umriin nama du’ee hin himne. Magaala Dakota county namni haarawa qabame 2 yoo ta’u walii galatti 1,741 gaheera.
Manni fayyaa Sioux land namni 4 dabalataan qabamu himan, akkasumas Woodbury county duuti haarayni hin galmooyne. Sababa coronavirus namni du’e 39 gaheera. Websitin coronavirus kan Iowa namni qabame 3,000 ol magaala Woodbury county ta’uu himan.
Kutaa guututi namni coronavirus qabame 24,000 olii kan du’e ammo 654 dha. Sa’aati 24 keessati namni du’ee 1 galmaahera har’a ganama sa’aati 10 tti.
Magaalan Nebraska namni coronavirus qabame 16,700 yoo ta’u namni du’ee 216.
South Dakota county keessatti namni haarawa covid-19 qabame 30 yoo ta’u waliigalatti 5,900 gaheera, kan du’e amoo 75 gaheera.
Hospitaala kan state Rushmore keessatti nama 87 ttu jirra.
Sioux City keessatti, MeryOne fi Unity point Health St.Luke’s akka jedhaniti nama covid-19 qabame 54 akka gargaaru jiran himan. Kunis guyyaa dura jirurraa namni 9 hir’ateera.
Vice president Mike Pence guyya Kibxata Iowa tti deebu’uuf karoora godheera. Innis governor Kim Reynolds waal gahii fi industiroota Winnebago daawa’achuuf.
Pence kaluuti DesMoines May keessa dhufee turee yerro coronavirus babaalatee saan keessa.
Seera baasa Iowa sababa covid-19 waggaa tokkof ammas dabalate dheerate jira.
Seera baasaan polisoota morma hudhuu kan dhoogu fi jijjiirama poolisi biraa godhaa jira.
Paartin Governor Reynolds namni badii qabuu sagalee kennuu seera isaa eeguu nama kummaa olii nidhoogani.
Ajajaan Black Live Matter fi Reynolds filannoo waliigalaati fi yeero eeysisuudhaf ajaja tokko malateesuf waada galeera. Garuu hanga yeroo summaara kanna booda ta’uu dhabuu nimala.
Har’a ganama hiriira baatonni mana caapitaala mootuma waliin haasahuudhan “filannoo haayaama” jechuudhaan hirriira walgahani bahanii turan.
Leenjisaan tabba kubbaa harka (football) kan Iowa Chris Doyle dalagaa irra ta’ee baheera. Isaa fi univercitiin million $1.1 tokkon malaqaa addaan basisa mallateesaniru.
Doyle taphaatoo guuracha bay’ee miidha kan tureedha.
Universiitin sagantaa kubbaa harka (football) gimgamaan akka godhamuu kubbaaniyya seera qaxaree jira.
Magaala Sioux city keessatti facility sadihii Leif Erikson, Lewis fi Riverside Wiyxata dhufuu June 22 ni jalqaba. Parkii fi sagantaan Rec akka jedhani seerawan haala itti adeema baafatan kaa manni fayyaa Sioux land hayyamuu. Qulqulina dabalataa fi hanga dandeeti waliin. Kana duura, magaalan barumsaaf, daakidhaafi dandetii qaametif qofa akka pooli banamu karoorse ture.
Local NewsLocalIowaMike PenceNebraskaSouth DakotaIowa Governor Kim ReynoldsnewsMercyOneUnityPoint Health St. Luke'sCOVID-19Siouxland District HealthOromoDakota County Health DepartmentBlack Lives Matter
Fatiya has worked for Mary J. Treglia Community House since 2013. She enjoys working at MJTCH because the work she does is life changing. Fatiya has pursued a degree in Early Childhood Education and has recently found a passion for immigration and refugee services. Fatiya has many hats at Mary J. Treglia Community House, and she speaks 4 different languages! Immigrating as a refugee from Ethiopia herself, she knows the struggle that people face when entering a new country.
See stories by Fatiya Adam
Fuula filannoo irratti torbaan tartee filannoo jalqaba magaala Woodbury county bu’aa filannoo
Fuula filannoo irratti torbaan tartee filannoo jalqaba magaala Woodbury county bu’aa filannoo irratti garaagarumma hin argamu.Har’a ganama filannoo…
Governor Iowa Kim Reynolds coronavirus hir’isuuf seera kaahame hir’isuu jiruu
Governor Iowa Kim Reynolds coronavirus hir’isuuf seera kaahame hir’isuu jiruu.Akka conference har’a ganamaatti, Reynolds Jum’aa sa’aati 8:00am irraa…
Magaala sioux City naannawa metro sababa covid-19 namni tokko dabalataan du’uu himan
Magaala sioux City naannawa metro sababa covid-19 namni tokko dabalataan du’uu himan. Haa ta’u malee manni fayyaa Dakota country umrii fi saala namaa…
Qondaaltota manya fayyaa akka himetti dhukuba covid-19 haarawa qabamuun magaala Woodbury county
Qondaaltota manya fayyaa akka himetti dhukuba covid-19 haarawa qabamuun magaala Woodbury county keessatti gad xiqqaatatuma dhufu jira. Itti aanan manna…